Izitshalo zokwelapha | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Izitshalo zokwelapha
Isikhumba esingenalutho: isitshalo esivela eNcwadini Ebomvu
Ezingxenyeni zethu, kutholakala izitshalo ezithile ezingajwayelekile. Kulezi, yiqiniso, kungabalwa futhi kungabonakali cerebro. Le mbali, ilungu lomndeni wakwa-Orchid lasendulo, ihlukaniswa nendlela yokuphila engavamile nokubukeka okungajwayelekile. Incazelo nesithombe Leafless Chorus (Epipógium aphýllum) uyilungu le-Genus Native Chord (Epipogium), engomndeni wakwa-Orchid, owaziwa nangokuthi i-Orchid Orchids (Orchidáceae).
Amathiphu amahle kakhulu okunakekelwa nokutshala kwe-calendula
I-Calendula ibhekwa njengokwelapha ngaphezu kwesitshalo se-ornamental. Nokho, i-orange-yellow, izimbali eziqhakazile esizinda esihlaza okwedlulele kubheka okungaphezu kokukhangayo. I-calendula ekhulayo izobukeka kahle kokubili eqenjini, futhi ekutshalweni okulodwa, enkabeni yezingoma noma njengehlaka.
I-Thyme: ukutshala, ukunakekela, ukuzala
Insimu encane enomnandi - i-thyme, ehlanganisa umhlabathi owomile kanye nesibhakabhaka se-solar flower carpet, isikhombise isikhathi eside umuntu. AmaGibhithe asendulo asebenzisa i-Thyme ngezinhloso zomkhuba. Ososayensi basendulo (u-Avicenna, uDioscorides, Theophrastus) wabhala ngezakhiwo ezinhle ze-thyme (i-antiviral, antifungal kanye ne-antibacterial).
I-calendula isetshenziselwa kanjani: izakhiwo ezizuzisayo kanye nokuphikisana
I-Calendula yisitshalo somuthi, esaziwa nangokuthi i-marigolds yokwelapha. Lesi sitshalo siqhakaza ngezimbali eziluhlaza-ophuzi ezidlala indima yokuhlobisa e-floriculture, kodwa ukubaluleka kwayo kubalulekile kulezi zimfanelo ezisebenzayo. Emithi yokwelapha, izindawo eziwusizo ze-calendula zisetshenziswa kakhulu ukuphatha izifo ezihlukahlukene.
Yini ewusizo we-horse sorrel
Amakhambi omphakathi ahlasela ngokuhlukahluka kwawo futhi kulula ukusebenzisa. Kuzo zonke izindawo, kuzo zonke izivande noma emahlathini, ungathola okuthile okuzosiza ekulwa nezifo nokuvimbela kwabo. Namuhla sizokhuluma ngezinto ezizuzisayo ze-horse sorrel, kanye nokuphikisana nokusetshenziswa kwalesi sitshalo.
Izakhiwo eziwusizo ze-buttercups, ukusetshenziswa kwezitshalo ezinobuthi ezindaweni ezahlukene
I-Buttercups ingenye yezimbali ezimangalisayo ezenziwe yendalo. Baxhuma okungahambisani: amandla nobuthakathaka, ukuzuza nokulimala, impilo nokufa, imithi kanye nobuthi. Izimbali eziphuzi eziphuzi ziye zaheha abantu ngokwabo isikhathi eside. I-Buttercup (i-Ranunculus) ikhulume ngeDioscorides (Ikhulu le-AD AD) emibhalweni yakhe. Izinkolelo zasendulo zamaScandinavians namaSlav zihlanganisa izimbali ze-buttercups no-Odin noPerun onkulunkulu.
Izakhiwo zokusebenza nokuphulukisa kwe-Monarda
I-Monarda iyi-spice elimnandi, isitshalo somndeni uGubotsvetnye. Izwe lakubo iNyakatho Melika. Sekuyisikhathi eside i-Monarda isetshenziselwa ukuphumula kanye nemithi. Ngekhulu le-XIX, le nhlanzi yaziwa emhlabeni wonke njengeBergamot, i-American lemon i-lemon, i-lemon mint. Uhlaza lwe-Bergamot luyisitshalo saminyaka yonke noma esingapheli kuze kufike kumamitha ayisithupha nengxenye ephezulu.
Kuyini i-verbena officinalis ewusizo
Kusukela ezikhathini zasendulo, i-verbena officinalis idume ngezindawo zayo ezihlukahlukene ezinenzuzo. I-Celtic Druids yambiza ngokuthi "ingcwele." I-Verbena yayisetshenziswa ngabahlengikazi nodokotela endleleni yabo yokwelapha. Kulesi sihloko, sibheka ukubunjwa kwamakhemikhali, izakhiwo zokuphulukisa eziwusizo ze-verbena, imikhawulo ekusetshenzisweni kwayo, ukusetshenziswa kwayo ekuphekeni, ukuqoqwa nokugcinwa kwezinsimbi zokusetshenziswa kwe-verbena.
I-Anise: izakhiwo eziwusizo, ukuphikisana nokulungiswa kwemishini eluhlaza kwezokwelapha
I-Anise yisitshalo saminyaka yonke esingaphansi kwesigamu semitha ephezulu. Isiqu siqondile, amaqabunga amancane amancane anemiphetho egcwele. Iqhakaza ekuqaleni kukaJulayi ngezimbali ezincane eziyisihlanu zombala omhlophe, ezakha ama-inflorescences amancane avulekile. Ngo-Agasti, lesi sitshalo sivuthwa isithelo esincane esithintekayo sibe nobude buka-3 mm nephunga elithile.
Konke mayelana nokukhula kwe-anise, ukutshala nokunakekela "ukunambitheka kwendawo yonke"
I-Anise iyitshalo elinezinhlobonhlobo ezinesiphuzo elimnandi-elimnandi nelithakazelisayo. Lesi sitshalo, esetshenziswa kabanzi ekuphekeni, e-pharmacology, e-cosmetology nasemithi yokwelapha, isihloniphe izakhiwo zayo ezicebile phakathi kwezigidi zabantu. Namuhla, i-anise iyalinywa cishe kuwo wonke amazwe omhlaba, kuyisilima kuphela eGrisi.
Ukukhiqizwa kwembewu ye-laurel, indlela yokutshala nokukhula izihlahla
Cishe bonke abesifazana cishe bajwayele amaqabunga e-bay, kodwa bambalwa babo bayazi ukuthi i-laurel ayiyona nje impepho engokwakhe, kodwa futhi isihlahla esihle kakhulu, esivame ukusetshenziselwa ukuhlobisa. Uma ufunda ngokucophelela zonke izici zokukhula nokuthuthukiswa kwayo, uzobona ukuthi ungakwazi ukutshala ngempumelelo isitshalo ekhaya.
Indlela yokukhula enhle engadini, ukutshala nokunakekela isitshalo ensimini
I-savory noma i-chobre, eyaziwa nangokuthi utshani be-pepper, yonyaka ovuthayo kakhulu, oqondile, obunotshani obunama-semi-shrub kuze kufike ku-70 cm. Isiqu se-pepper utshani sinama-violet phansi, amaqabunga amancane ngenduku ebukhali, umbala omnyama ohlaza. Lesi sitshalo sinezimbali ezincane kakhulu ezikhanyayo ezibomvu, ezikhanyayo eziphuzi noma ezibomvu.
I-ayisi enamafutha ne-lemon - indlela yokuhlukanisa izitshalo
Ezindaweni zasemadolobhaneni naseduze nezindawo ezizimele zivame ukutholakala nezitshalo ezinjengezici kanye ne-lemon balm. Iningi labantu cishe libafake izikhathi ezingaphezu kweyodwa njengetiye, kodwa awukwazi ngaso sonke isikhathi ukuthi yisiphi isitshalo esiphambi kwakho. Bafana nokubonakala okufanayo nephunga, yingakho kudidekile.
Izinhlobo zeminwe nencazelo nesithombe
I-Mint iyisitshalo esibaluleke kakhulu futhi esiwusizo esasetshenziswa ngumuntu ezikhathini zasendulo. Ezweni lanamuhla kuyadingeka kwezokwelapha, ukupheka, amakha. Lesi sihloko sinikeza ulwazi ngokuthi yiziphi izinhlobo zeminithi ezitholakalayo, futhi ulwazi oluthile mayelana nolunye lwawo lunikezwa. Uyazi? Ngokusho kwe-database ye-The List List, i-Mint ye-genus ingeyomndeni we-Luminous futhi iqukethe izinhlobo ezingu-42 nezinhlobo zemvelo.
Kupena: ukutshala, ukukhula nokukhathalela
I-Koupena iyinhlangano ehlala isikhathi eside eyazizwa kahle emthunzini, okusho ukuthi kungaba yinto enhle yokusiza ensimini enzima. I-garden lily yesigodi (igama lesibili yi-kupeny) lihle kakhulu ekudaleni imiklamo emvelweni, ikakhulukazi ngokucabangela ikhono lezitshalo lokukhula ngokushesha. Sekuphelele, kunezinhlobo ezingaba ngu-50 ze-kupen, kanti izinhlobo ezihlukahlukene azifani nje nombala kanye nokuma kwezimbali, kodwa futhi ngobukhulu behlathi ngokwalo (isibonelo, i-giant Chinese kupen ikhula kuze kube ngu-120 cm).
Iyini i-sedan emnyama ezuzisayo, izakhiwo zayo zokuphulukisa nokulimala
Amazambane, utamatisi nama-eggplants, okujwayele ukuphila kwethu kwansuku zonke, ziphakathi kwezinhlobo ezingamakhulu ayisishiyagalolunye zezilwane zomndeni we-herbaceous wonyaka, owaziwa ngokuthi i-herbed. Ummeli ovelele waleli qembu elikhulu yizinwele ezimnyama, ezinokuthi ukuphilisa izinzuzo zabahlengikazi kuye kwaziwa isikhathi eside, kusukela ngesikhathi sikaHippocrates, kanye nokulimala okungase kungakhohlwa odokotela.
Indlela yokukhula lovage ezweni
I-Lovage njengezitshalo ze-ornamental ayinasithakazelo esincane, kodwa njengoba sekuyisikhathi eside sekuyaziwa ukuthi i-herb esiphundu neyomuthi. Iphunga ne-tart ukunambitheka kwe-lovage kufana ne-celery. Humushela incazelo ku-isiZulu usebenzisa i-Google Translate? Amaqabunga ezitshalo afana kakhulu namawele: okucwebezelayo, amaqabunga aluhlaza okwesibhakabhaka ahlaza okwesibhakabhaka anemiphetho ejijiwe ehlukaniswe izingxenye eziningana.
I-Barberry: ukwakheka, ukusetshenziswa, izakhiwo ezizuzisayo kanye nokuncintisana
I-Barberry emasimini nasemasimini ayivamile namuhla. Abasimili abazimisele kakhulu ukubhekana nezihlahla ezinameva futhi bakwenze ngokuphelele. I-Barberry, izakhiwo zayo ezizuzisayo kanye nokuphikisana kwazo sekuye kwaziwa isintu isikhathi eside. Phakathi kwezinzuzo zalo (ngaphandle kokuphazamisa kuzo zonke izimfanelo - ukuhlobisa, ukuncibilikisa, ukunambitheka, njll.
Ukusetshenziswa kwezakhiwo ezizuzisa nokuphulukisa komlotha
Ash - isitolo sokugcina izakhi. Emithi yokwelapha, sebenzisa zonke izingxenye zesitshalo: amagxolo, izimbali, izithelo namaqabunga. Izidakamizwa, ezifaka umlotha, zisindise ezifweni eziningi. Incazelo yomlotha kanye nokwakheka kwawo okwelapha i-Ash - umuthi omude onamandla. Amaqabunga awo anamachashazi amnyama. Iqabunga ngalinye linamaqabunga ayisikhombisa noma amancane.
Uyini umehluko emkhatsini wezokwelapha kanye nensimu (i-meadow)
Sage, noma salvia - enye yezitshalo eziwusizo kakhulu. IsiLatin sihunyushwe ngokuthi "sinempilo." Ezokwelapha, i-salvia isetshenziselwa kanye namakhambi awaziwayo okwelapha njenge-chamomile ne-calendula. Kubonakala kalula imibala eluhlaza okwesibhakabhaka kanye nephunga elicebile. Kunezinhlobo eziningi ze-sage, futhi zonke zinempahla kanye nephunga elilodwa.
Indlela yokutshala nokwanda kwe-catnip engadini
I-Kotovnik - isitshalo esincane esasetshenziswa isikhathi eside esiphunga elimnandi. Kungokomndeni weWundskin. I-Kotovnik ibhekwa njengomuthi omuhle wezinyosi futhi inempilo yokuphulukisa. I-Kotovnik: incazelo yesitshalo Kukhona izinhlobo ezingaphezu kuka-200 ze-catnip. Ikati le-Kotovnik - omunye wabameleli baleli gciwane. Linamanye amagama - i-catnip lemon noma i-catnip.
Shchitovka currant: izinyathelo zokulwa nabo, isithombe
Ukunakekela imishini yokuhlobisa i-fittonia mix ekhaya
Indlela ukutshala futhi sikhule strawberries-strawberries ezihlukahlukene "San Andreas"
Izinkukhu Zezinkukhu: Izimpawu, Ukuvimbela, Nokunakekelwa
Indlela yokusakaza i-honeysuckle capricole ekhaya